DF oo guullo ka sheegatay dagaalladii ka dhacay gobolka Galgaduud | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta DF oo guullo ka sheegatay dagaalladii ka dhacay gobolka Galgaduud
DF oo guullo ka sheegatay dagaalladii ka dhacay gobolka Galgaduud
Wararka aan ka helayno degaanka Bulacle ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo Ciidanka xoogga dalka uu halkaasi ka qaraxay, isla markaana jab xoogan loo geystay argagixisada Al-Shabaab.
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ka war helay in degaanka Bulacle ee Gobolka Galgaduud ay isku aruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, kadibna ay bilaabeen inay ku baxaan deegaanka oo ay jab u geystaan argagixisada Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay Idaacada Ciidamada ayaa sheegay in dagaalka Bulacle lagu dilay maleyshiyaad iyo Horjogayaal ka tirsan Nabadiidka Al-Shabaab.
Generaal Odowaa Yuusuf Raage waxa uu tilmaamay in dagaalka lagu dilay ku dhawaad 16 ka tirsan Nabadiidka Al-Shabaab
Ugu dambeynti Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa xusay in dagaalka Al-Shabaab looga qabsaday sideed qori uu isugu jira Ak47, PKM iyo Hal qori oo saban ah (RBG rocket).
Maqaal horeMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo la kulmay wafdi WFP ka socda
Maqaal XigaMaalinta Nabadda Adduunka Oo laga xusay Soomaaliya + Sawirro